Rita, Writing for My Sake!: ဂျူး နှင့် ၀င်းငြိမ်း အင်တာဗျူး (၅)
Posted by Rita at 5/10/2009 07:06:00 PM
အမေအကြောင်းကို ဖတ်ရတော့ ဂျူးရေးတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲက စာကြောင်းတစ်ချို့ကိုတောင် သတိရခဲ့မိတယ် ...
လောကကြီးမှာ ကြွေသွားတဲ့ ပန်းတွေအများကြီး
အဲဒီထဲမှာ ပန်းပြန်ပွင်တဲ့ပန်း မရှိဘူးလို့ထင်လား
တချို့ပန်းပွင့်တွေက တစ်စစီဖဲ့ချွေခံလိုက်ရပေမယ့် ပန်းပြန်ပွင့်နိုင်တဲ့ သတ္တိတွေရှိတယ် ..."
ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့ အတောင်ပံ ဝတ္ထုထဲက စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပါ ... ဂျူးပြောခဲ့သလို " အမေ့ အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်နိုင်လောက်အောင် ကျွန်မလက်က ထိုက်တန်ရဲ့လား " ဆိုတဲ့ စကားက ဖြစ်သင့်ပါတယ် ... ဘယ်လောက်ပဲ အရေးအသား နူးညံ့ပြေပြစ်တဲ့ စာရေးဆရာကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေ့စေ မိဘမေတ္တာကို ပြည့်စုံအောင် ဖွဲ့သီဖို့တော့ အနဲနဲ့အများ အခက်အခဲရှိပါတယ် .. ခက်ခဲပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ပေးဆပ်နိုင်စွမ်းကို သူအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ " ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့ အတောင်ပံမှာ " ဖော်ပြနိုင်ခဲ့တယ် ... မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်စိတ်လို့ခေါ်မလား ?? ဒါမှမဟုတ် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းလို့ ခေါ်မလား ?? နောက်တစ်ပိုင်းကို စောင့်နေပါ့မယ် ...
၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ရအောင် ကုန်ကြမ်း ဘယ်လို ရှာတယ်
What isameaning of ကုန်ကြမ်း ?
ကုန်ကြမ်း = raw materials
I understand that raw materials used
relating to or consisting of solid physical matter.
A novelist or author have written by taking their feelings, emotions related the appropriate environment.
I hate that word ကုန်ကြမ်း.
Do you have other available (appropriate) word.
ကုန်ကြမ်း ဆိုတာကတော့ ပြောရိုးပြောစဉ် ပြောလိုက်ကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်ကာလမှာ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတချို့ရဲ့ စာရေးပုံ (Not writing style)၊ ကုန်ကြမ်းရှာပုံ တွေကလည်း အင်မတန် hot ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အမြင်တော့ ဒါ motivation, inspiration ပါပဲ။ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် အရာတခုခုပေါ့။ ဒါကို တချို့က ရှာယူတယ် ဆိုတာကိုး။ အဲဒီ ရှာယူတယ်လို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ စာရေးသူတွေရဲ့စာဟာ ဂျူးလောက်တော့ တင်မကျန်ခဲ့တာ သေချာတယ်။
ကျွန်မတော့ စာရေး စား တဲ့သူတွေကို အထင်မကြီးဘူး။ သူတို့ စာရေးစားလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တပြိုင်နက် အရည်အသွေးဟာ ချက်ချင်းကျ သွားတော့တာပဲ။ ဒါမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေ ဒီနေ့ခေတ်မှာလဲ အများကြီးပါပဲ။
တာရာမင်းဝေ တို့၊ မင်းခိုက်စိုးစံ တို့ စာတွေ နောက်ပိုင်း ဘာဖြစ်သွားသလဲ။ သူတို့ ပရိသတ် တစ်ယောက်ချင်းကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မလည်း သူတို့ ပရိသတ် တစ်ယောက် (ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ) ပါပဲ။
Rita, Thanks for explanation.
I accepted above the words motivation, inspiration.
ကျွန်မတော့ စာရေး စား တဲ့သူတွေကို အထင်မကြီးဘူး။ သူတို့ စာရေးစားလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တပြိုင်နက် အရည်အသွေးဟာ ချက်ချင်းကျ သွားတော့တာပဲ။
Your words is definitely right.
Most of writers said that the publisher pushed me, public reader demanded me to........